4 makiyi emuchato wakakwana | Bezzia
4 makiyi emuchato wakakwana
Maria vazquez | 08/09/2021 10:00 | Muchato
Chii chakakosha kuti muchato uve wakakwana? Pane zvinhu zvakawanda zvekusarudza, vanhu vazhinji kuti vataure, zvekuti hapana munhu anogona kushamisika kuti vanhu vazhinji vari kuhaya masevhisi ekambani. nyanzvi mukuronga nezvemuchato kana wekugadzirira muchato.
Imwe yekiyi yekupemberera muchato wakakwana ndeye lchengetedza musangano wakangwarira yeimwe yegadziriro. Nekuti kunze kwekuda uye kushingairira, kune humwe hunhu hunodiwa kutarisana neiro basa rapfuura senge kushivirira uye kuronga. Kune makiyi mashoma emuchato wakakwana uye mazhinji panguva imwe chete.
1 Rwiyo rwakanaka
2 Nzvimbo chaiyo
3 Iwo ruzivo
4 Vaenzi vemuchato
Kurongeka kwakanaka kiyi kuitira kuti zuva remuchato risvike zvese zvinoshanda semuchina wakazara mafuta. Kuti vaenzi havafaniri kumirira kunzvimbo yemabiko kwenguva yakareba kuti vachati vasvike, kuti vazive kwavanofanira kuenda nguva dzese, kuti hapana nguva yakawandisa yekumirira pakati pemahwendefa kana kuti kamwe mabiko kana kupemberera munhu wese anokwanisa kusvika kumba nekukurumidza sezvazvinokosha kiyi yemuchato wakakwana.
Pane zvinhu zvakawanda zvekufunga nezvazvo uye zvinonetsa kusununguka pamuchato uye kunakirwa nazvo kana uchifanira kuziva zvese izvo zvinhu mumunhu wekutanga. Naizvozvo, vanhu vazhinji uye vazhinji vari kubheja kupa vamwe uye kuva ne nyanzvi munhu musangano nedivi rako pazuva rakakosha seichi. Zviri nyore kunzwisisa, handiti?
Muchato uchaitikira kupi? Ichi chi imwe yesarudzo dzakakosha kwazvo kuti chiso chemwenga nechikomba. Vakaroorana vanowanzojekerwa nezverudzii rwemhemberero yavanoda, ungave muchato wehurumende kana muchato wechitendero, asi kwete zvakanyanya kwavanoda kupemberera iyi nemabiko anotevera.
Kusvikira makore mashoma apfuura, iyi sarudzo yaive nyore. Mhemberero dzakaderedzwa kubva kudare kuenda kuchechi uye mabiko aiwanzoitirwa mumahotera makuru nemaresitorendi. Nhasi, zvakadaro, mikana yacho isingaperi: mapurazi, dzimba dzekurima, mapindu…. zvese zviripo kune vakaroora.
Iyo yakanaka ndeye kubheja nzvimbo yekuti munhu wese anzwe kugadzikana; tese isu vakomana nevashanyi. Chii chatinonzwisisa nekusununguka? Usanzwe kubva panzvimbo kana kunyanyokuremerwa; ita kuti ive nzvimbo inoita kuti vanzwe pakarepo vakasununguka.
Uyewo, kana nzvimbo isingawanikwe zvakakwana, isu tinofanirwa kupa vashanyi vedu nzira yekuenda kwairi. Bhadhara basa rebhazi iro rinogona kutanga kutora vaenzi kumabiko uyezve, pakupera kwemabiko, kuenda kudzimba dzavo.
Tsanangudzo yakakosha uye inogona kushandura nzvimbo. Maruva uye mwenje ingangove maviri ezvinyanya kukosha kana zvasvika pakushongedza kwemuchato. Ivo vaviri vane kugona gadzira nzvimbo inogamuchirwa uye inokwezva.
Maruva akakosha patafura. Sezvineiwo, sanganisa nzvimbo dzakadzika uye dzakakwirira kuti upe kufamba; yakakurudzirwa nevaya vanonzwisisa hunyanzvi uhu. Uye kana bhajeti iri yakaoma, iwe unogona kugara uchitsiva maruva nemashizha egirini.
Kuvhenekesa kwakakosha, mukuwedzera pakuita nzvimbo inogamuchirwa uye inokwezva, kuichinjanisa nemaawa akasiyana ezuva. Kuvhenekera kwakanaka kwakakoshawo kune tora mifananidzo yakanaka. Uye zvakare chinhu chekuchengetedza. Kana mabiko acho ari usiku, isu tichafanirwa kuve nechokwadi chekuti vaenzi vanowana nzira dzese dzakavhenekerwa.
Pamuchato, vaenzi chinhu chakakosha. Vanofanira kunzwa vakasununguka nguva dzese, kuziva kwekuenda, sei uye nguva yekusvika ikoko. Uye zvakare, isu tinofanirwa kupa, nepazvinogona napo, ruzivo nezveguta kune avo vanofamba uye, sezvatatotaura, nzira dzekuenda nekudzoka kumuchato kana ino isiri nzvimbo inowanikwa.
Kana iwe zvakare uchida kuve ne tsanangudzo nevashanyi Iyo yakanaka ndeye kubheja pane chimwe chinhu chinoshanda chavanozoshandisa pamuchato kana kumba. Tiri kutaura nezve espadrilles, mafeni, plaids, zvitsvuku ... zvichienderana nemwaka waunoroora, imwe kana imwe ichave iri kubudirira.
Isu tinotaura nguva dzese nezvevaenzi uye ndizvozvo sarudza vaenzi zvakanaka uye rega vafare Ndiyo imwe yekiyi yakakosha kumuchato wakakwana. Uye nekusarudza mushe tinoreva kukoka avo vatinonzwa kugadzikana pakati pavo. Muchato unozove zuva rakakosha, rakanaka asi rinotyisa, saka zvirinani kuve wakakomberedzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Muchato » 4 makiyi emuchato wakakwana
Iwo makuru maitiro mune vhudzi mavara kune uku kudonha
Tsika dzinobatsira kusimbisa vaviri vacho